Su’aalo iyo jawaabo khuseeya sugitaanka baaritaanka magangelyada - Migrationsverket
/ Su’aalo iyo jawaabo khuseeya sugitaanka baaritaanka magangelyada
Frågor och svar om väntan på asylutredning – somaliska
Habkee u dhacaa baaritaanka magangelyadu?
Baaritaanka magangelyadu waa kulan lagu qabto Hay’adda Socdaalka, halkaas oo aad kula kulanto hawlwadeen ka socda Hay’adda Socdaalka, kaas oo baaritaan ku sameyn doona codsigaaga magangelayada. Inta kulanka lagu jiro waxaad ka warbixineysaa qofka aad tahay, sababta aad magangelyada uga dooneyso Iswiidhen iyo wxyaalihii kugu soo dhacay. Haddii laguu qabtay qareen ku matala wuxuu qareenkaasi goobjoog ka ahaan doonaa kulanka isagoo kaa caawinaya sida aad arrintaada uga sheekeyneyso. Waxaan isna halkaas jooga turjubaan turjumaya wax alla o okulanka laga sheego.
Markaaad imaneyso kulanka waraysiga waxaad soo qaadaneysaa baasaboorkaaga ama wixii kaloo caddeymo aqoonsi ah. Caddeymahaasina waa inay noqdaan kuwo muujinaya magacaaga, goorta aad dhalatay iyo dalka aad u dhalatay. Waxaad kaloo la imaan kartaa wixii kaloo caddeymo ah oo aad u cuskaneyso waxa aad sheeganeyso inay kugu dhaceen ama wixii warbixino ku saabsan dalkaaga.
Ilaa imisa baa aniga sugidoona intaan la iga yeeridoono baaritaanka magangelyada?
Maadaama dad badan ka codsateen magangelyo Iswiidhan dayrtii 2015 waxey qaadan wakhti dheer inta laguu suubin ballanta baaritaanka iyo go’aanka ka heleysid, oo suurtagal ma’ahaan in hordhac ahaan laguu sii sheeko intaa sugidoontid.
Maxaa sabab u ah inaa aniga sugo wakhti dheer baaritaanka magangelyada?
Dayrtii 2015 dad oo tiradooda aad u badantahay baa Iswiidhan ka codsadeen magangelyo. Dadkaas oo tiradooda aad u badantahay baa sugaayaan baaritaanka magangelyada, oo taasna sabab u tahay Hey’adda socdaalka wakhtiga la sugaayo iney dheerato.
Intaa sugeysid adiga waxaa ka diwaangalisantahay qeybta qaabilaada oo adiga kaa caawineyso waxyaabaha sida camal guriga iyo biilkaada.
Waxaad la iigu yeeray baaritaan magangelyo laakiin waxaad doonayaa inaan maalin kale imaado. Ma iska beddeli karaa waqtiga?
Maadaama ay dad tiro badani magangelyo ka codsadaan Iswiidhen waxaa waqtigaan xaadirka ah sidii hore ka dheeraada sugitaanka in la isugu yeero baaritaanka ama waraysi magangelyo. Haddaba si ay Hay’adda Socdaalku ugu qabato dhammaan dadka magangelya-doonka ah waqti baaritaan magangelyo looga qaado sida ugu dhaqsaha badan, waxaa adag inaad iska beddesho waqtiga laguu qabtay.
Aniga waxaa garanaayaa qof aniga iga dambeeyay oo magangelyo codsaday oo hadana loo soo diray wakhtiga baaritaanka magangelyada. Maxaa arrintaas sabab u ah? Miyey Hey’adda socdaalka i iloowday aniga?
Hey’adda socdaalka ma eysan ku iloobin. Dhammaan dadka diwaangaliyeen iney yahiin magangelyodoon waxey ku jiran saf iyo sugaayaan baaritaanka magangelyada.
Si oo si waanagsan u isticmaalno wakhtiga baaritaanka si oo cadaalad ahaan loo ma qeybinkaro wakhtiyada baaritaanka. Tusaale ahaan wakhtiyo cusub baa firaaqo ka noqon karo magaalooyinka qaarkood iyo dad imaanshahooda adiga kaa dambeeyay baa baaritaanka loogu yeerikara oo adiga bey horumari karan. Adiga ballantaada oo baaritaanka weey soo dhaahi kartaa maadaama wakhtiyada firaaqada loogu talagalay qoys ama qof kaligiis ah. Sida ugu dhaqsaha badan oo wakhti adiga kugu habboon firaaqo u noqdo waxaa laguu soo diri wakhti ballan.